Kodzero-dzevanhu, 09 Chivabvu 2019
China 9 Chivabvu 2019
Chivabvu 09, 2019
Bhiri reMutemu Ucharambidza Kurangwa kweVana veChikoro Rounza Kupesana kweVarairidzi
Vachipawo humbowo kukomiti iyoyi, mutungamiri wesangano rinomirira varairidzi vekumaruwa, reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, VaObert Masaraure, vati sangano ravo rinobvumirana nezviri mubhiri reEducation Amendment Bill zvekuti vana vasarangwe muzvikoro.
Nyanzvi Dzozeya Mutongo Unoti VaChamisa naVaMudzuri Vakasarudzwa Zviri Kunze kweMutemo
Nyanzvi munyaya dezvemutemo nedzematongerwo enyika hadzina kunyatsowirirana panyaya yemutongo wakaturwa nedare repamusoro nezuro wekuti kudomwa kwakaitwa namuchakabvu Morgan Tsvangirai kwaVaNelson Chamisa naVaElias Mudzuri sevatevedzeri vavo kwainge kusiri pamutemo.
Vanotengesera Mumigwagwa Vanorwisana neMapurisa muHarare
Vanotengesera Mumigwagwa neTajamuka Vanorwisana neMapurisa muHarare
Chivabvu 08, 2019
Vatori veNhau Vanoti Havana Kusungunuka Kunyangwe Hurumende Iri Kuvimbisa Kuvandudza Zvinhu
Vatori venhau vanoti kusungwa kwavari kuitwa kunoratidza kuti hurumende haina kuchinja maitiro ayo.
MDC Inoti Kongiresi Yavo Iri Kuenderera Mberi Kunyangwe Dare Rati VaChamisa Vakasarudzwa Zvisiri paMutemo
Dare repamusoro reHigh court nhasi rapa mutongo wekuti mutungamiriri weMDC, VaNelson Chamisa vakagadzwa zvisiri pamutemo uye bato iri rinofanirwa kuita musangano wechimbi-chimbi kana kuti Extraordinary Congress mushure memwedzi kuti utsvage mumwe mutungamiri.
Zvimwe Zvizvarwa zveZimbabwe Zviri muSouth Africa Zvinoongorora Sarudzo
Zvizvarwa zvenyika zvapinda musarudzo dzekutsvaga nhengo dzeparamende pamwe nevamiriri vematunhu, idzo dzinonzi nevamwe dzinogona kuona bato riri kutonga reAfrican National Congress, ANC, richikunda zvakare, asi kwete zvine mutsindo.
Zvizvarwa zveSouth Africa Zvopinda muSarudzo Huru dzeNyika Yose
Zvizvarwa zveSouth Africa zviri kupinda musarudzoi, idzo dzinonzi nevamwe isarudzo dzicharatidza kana bato reAfrican National Congress, ANC, richakasimba sezvo mamwe mapato anopikisa akaita serevechidiki, reEconomic Freedom Fighters neDemocratic Alliance, ari kunzi anenge akakwanisa kupind
Bato Idzva reZvematongerwo eNyika reLEAD Rinozivisa Kuti Richakwikwidza muSarudzo Dzose
Bato reLabour, Economists and African Democrats, kana kuti LEAD, rinoti razivisa zviri pamutemo Zimbabwe Electoral Commission kuti ibato rezvematongerwo enyika richakwikwidza musarudzo dzese kubva kumakanzuru kusvika kuhutungamiriri hwenyika.